ဒီမိုကရေစီနှင့်ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီသည် နိုင်ငံသားများအတွက် နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတ များတိုးတက်ရန်၊ ဒေသအတွက်အရည်အသွေး ပြည့်ဝသည့်နိုင်ငံသားများ ပေါ်ပေါက်လာရန်နှင့် နိုင်ငံသားများနိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်မှုတိုးတက်လာရန်အတွက် PACE မှ သင်ကြားပို့ချသော သင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး (ကာလရှည်နှင့်ကာလတို) ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်၏ အဆိုးအကောင်း တွေ့ရှိချက်များကို တိတိကျကျဖော်ထုတ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု နှင့် ပြည်သူ အားလုံးပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်မည့် ရွေးကောက်ပွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကြံပြုချက်များ နှင့် အစီရင်ခံစာများထုတ်ဝေသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းများကောက်ယူရာတွင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စာရင်းအင်းနည်းအရ ကျပန်းနည်းဖြင့် ရွေးချယ်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် သတင်းမီဒီယာများတွင် ပြောခွင့်ဆိုခွင့် အခွင့်အရေးနည်းပါး သည့် နိုင်ငံသားများ၏ အသံများ၊ သဘောထားအမြင်များကို စုစည်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ လွှတ်တော်များ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပြည်သူလူထုအပေါ် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု မြင့်တင်ရန်အတွက် ပြည်သူလူထု နှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့သည် အစိုးရမဟုတ်သော လွတ်လပ်သည့် ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာ ရေးအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူပြည်သားများ၏ အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ခြင်း နှင့် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လှုပ်ရှားလာရေးတို့ကို မြှင့်တင့်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအင်စတီကျူးရှင်းများ ပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာလာရေးကို ရည်မှန်းကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာပြီး ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုအတွက် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပြည်သူ့နီတိဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စီမံကိန်းအစီအစဥ်အဖွဲ့သားများသည် PACE၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်း၊ ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ပြင်ပဆက်ဆံရေးအဖွဲ့သားများသည် PACE ကိုဘက်လိုက်မှုကင်းသောအဖွဲ့အဖြစ် အများကယုံကြည်မှုရှိအောင် ပုံဖော်ရသည့် တာဝန်ကို အဓိကလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ပြင်ပဆက်ဆံရေးနည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သားများသည် PACE၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို စနစ်တကျဖြစ်စေရန် ဦးဆောင်ကြီးကြပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သားများသည် PACE၏လုပ်ငန်းစဥ်များ နှင့် လှုပ်ရှားမှုများအတွက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများ ကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ရသည်။
ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့သားများသည် PACE၏ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
PACE အဖွဲ့မှ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ သဘောထားအမြင်များကိုထင်ဟပ်စေရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များအားလုံးရှိ အသက် ၁၈နှစ် နှင့် ၁၈နှစ် ပြည့်ပြီး နိုင်ငံသားများကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ကာ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ခံ အခြေအနေမတူညီသော ရန်ကုန်မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ အမြင်နှင့် သဘောထားသုံးသပ်ချက်များကို . . .
ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရာတွင် တွေ့ရှိချက်များသည် ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စား ပြု ထင်ဟပ်စေရန် PACE အဖွဲ့မှ “နည်းစနစ်မူဘောင်” စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ . . .
PACE၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို Department for International Development (DFID/UKaid), National Democratic Institute (NDI), National Endowment for Democracy (NED), Norwegian People’s Aid (NPA) နှင့် Open Society Myanmar (OSM) တို့၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
အမှတ် ၁၄၊ စံရိပ်ငြိမ် ၅ လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
စက်တင်ဘာ 24th, 2020
ကြော်ငြာစာကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာလျက် ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းရန်မရှိဟု ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပြီး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ရက်မှာလည်း ၄၄ ရက်သာ ကျန်ရှိ တော့သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ရန် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားသည့် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများ ခေါ်ယူလိုပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ကာလတိုရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူအဖြစ် PACE နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးရေ ၂,၀၀၀ ခန့် လိုအပ်ပါသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူများ ပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူအဖြစ်လျှောက်ထားသူသည် – နိုင်ငံရေးပါတီဝင်မဟုတ်သူ။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ ပါတီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို …
Continue reading “ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကာလတိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ) များခေါ်ယူခြင်း”